Wararka Maanta: Axad, July 1 , 2012-Dabaaldagyada 1-da Luuliyo oo lagu qabtay Nairobi, Taasoo ay ka qaybgaleen madax sare (DAAWO SAWIRRO)
Dabaaldagyada 1-da Luuliyo oo lagu qabtay Nairobi, Taasoo ay ka qaybgaleen madax sare (DAAWO SAWIRRO) Axad, July 01, 2012 (HOL) - Boqollaal
Soomaali ah ayaa xalay isugu tagay gurigii hore ee safaarada Soomaalida ee
magaalada Nairobi, halkaasoo ay isugu yimaadeen qaar kamid madaxda qaranka.
wasaaraha Soomaaliya C/wali Maxamed Cali Gaas, ra’iisul wasaarihii hore ee
Soomaaliya Cali Maxamed Geedi, Safiirka Soomaaliya Maxamed Cali Nuur Ameerika,
xubno ka tirsan golayaasha wasiirrada iyo baarlamaanka, madaxweynaha Galmudug
Maxamed Axmed Caalin, qaar kamid ah fanaaniinta qaranka oo ay hormuud u ahayd
fanaanadii ummada Hibo Maxamed Gudoon (Hibo Nuuro) iyo dadweyne kumanaan
gaarayay ayaa isugu tagay goobtaas.
dadweynaha la hadlay safiirka Soomaaliya Maxamed Cali Nuur ( Ameeriko) oo
xafladaas soo qaban qaabiyay, isagoo sheegay inay farxad u tahay in dadka
Soomaaliyeed ay u dabaal dagaan 1-da Luuliyo iyadoo ay la joogaan madaxdoodii
wasaaraha Soomaaliya C/wali Maxamed Cali Gaas oo goobtaas ka hadlay ayaa
ammaanay halgamayaashii xorriyada, isagoo Soomaalidana ugu baaqay inay
wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi ayaa isna u hambalyeeyay
ummada Soomaaliya isagoo ku boorriyay Soomaalida inay haatan u istaagaan dhisitaanka dawlad awood
leh oo soo celisa sharaftii ummada.
Madaxweynaha Galmudug Maxamed Axmed Caalin, wasiirkii hore ee gaashaandhiga
Soomaaliya C/xakiin Fiqi iyo madax kale oo fara badan ayaa iyaguna halkaas
khudbado ka jeediyay.
Soomaalida ee goobtaas joogay ayaa qaadayay heesaha wadaniga ah.
ay saacadu soo gaartay 12kii saqda dhexe ayaa la saaray calanka Jamhuuriyada
C/samad, Hiiraan Online
Axad, July 01, 2012 (HOL) — Kooxo hubeysan ayaa xalay waqooyiga degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ku toogtay xeer ilaaliyihii maxkamadda gobolka ee maamulka Puntland, Bashiir Cabdi Maxamed oo ku magac-dheeraa Garas. Xarakada Al-shabaab oo sheegtay in sarkaal iyo ciidammo ka tirsan DKMG ah ay ku dileen Dagaal ka dhacay Deegaanka Lafoole 7/1/2012 7:33 AM EST